musha » Zviratidza
Zvinoratidzika World World March
Makumi gumi mushure mei Nyika Yekutanga Kuronga Rugare uye Kusagadzikana, zvikonzero zvakamukurudzira, kure nekudzikiswa, zvakasimbiswa. Isu tinorarama munyika iyo yevamwari unilateralism inokura. Basa rekutanga reUnited Nations mukugadzirisa kusawirirana nedzimwe nyika kuri kupera simba. Nyika inobuda murudzi rwehondo dzakawanda, kazhinji dzinyaradzwe nekutaura zvisirizvo. Izvo zvakasikwa zvinokanganisa izvo Club yeRoma hafu yezana apfuura Nemamirioni evatamira, vapoteri uye vanogara munzvimbo dzakasarudzika vanomanikidzwa kupomhodza miganhu izere nekusarongeka nerufu. Iko kunorongerwa kururamisa hondo nehumhondi hwekukakavara kwemidziyo inowedzera kushomeka. Iko kusawirirana kwe "geopolitical mahwendefa" pakati pemasimba ane simba uye anobuda anomutsa kukanganisika kutsva uye kune ngozi. Nyika umo makaro evapfumi vakapfuma, kunyange munyika dzakabudirira, tarisiro chero ipi zvayo yenharaunda yehutano. Mafungu ekutsamwa anogadzirwa anoguma achinyengera uye achigadzira kufamba kunotyisa kwekurambwa uye xenophobia kune vapoteri nevatorwa. Muchidimbu, nyika, mune iyo kururamisa kwechisimba, muzita re "chengetedzo", inowedzera njodzi yekuwanda kwemauto kwehuwandu husingadzoreki.
El Chibvumirano chekusava nehuwandu hweNyukliya Weapons, kubva ku1970 , kure nekuvhura nzira kuenda kune zvombo zvenyukireya, yakasanganisa iyo
simba rekuparadza kwevanhu vazhinji, kuwedzera kunyange kirabhu yekutanga yenyika yekufa nebato renyukireya zvino iri mumaoko eUS, Russia, China, United Kingdom, France, Israel, India, Pakistan uye Republic of Korea. Zvese izvi zvinotsanangura chikonzero nei Atomic Scientists Committee ichiisa iyo index iripo (Doomsday Clock) sezvo dambudziko guru munyika yose raigara kubva kune Crisis of the Missiles of Cuba in 1962.
Nhasi, the 2ª Nyika Inofananidzira Rugare uye Kusagadzikana, inodikanwa kupfuura kare. Izvo zvinorongwa kubva kuMadrid muna Gumiguru 2 ye2019 kurira makondinendi ese, kusvika munaKurume 8 ye2020 ichagumisa muMadrid. Ichasimudzira dzidzo mukusazvibata uye inofambisa mafambiro ayo pasi rese anodzivirira nekusimudzira
demokrasi, kurarama munharaunda uye kururamisira, kuenzana kwevanhukadzi, kubatana pakati pevanhu nekusimudzira kwehupenyu papasi. Kurume inotsvaga kuratidzira nekupa simba kushanya uku, nharaunda nemasangano, mukubatana kwepasi rose kwemaitiro kune zvinangwa zvinotevera:
Kumutsa chishamiso chikuru chenyika iyo "isu, vanhu " of the Sangano reUnited Nations, kutsigira i Chibvumirano Chekudzivisa Nuclear Weapons, iyo inobvisa kukanganisa kwenyika inoparadza uye inosunungura midziyo yekugadzirisa zvinodiwa zvevanhu.
Ratidza all United Nations , kupa rutivi kumasangano ehurumende, kudzvokora hurumende yeHarare kuchengetedza iyo kuva yakarurama World Peace Council . uye kusika a Council of Environmental and Economic Security, izvo zvinosimbisa zvishanu zvinokosha: zvokudya, mvura, utano, nzvimbo uye dzidzo.
Funga a Nzara Kurasikirwa Plan, maererano neDGGs (Sustainable Development Goals), iyo ine mari yakakodzera kuti ibudirire.
Shingairira a Purogiramu Yekukurumidzira Miitiro yekurwisana nemarudzi ose ekuderera, kusarura, kusarura, kusarura nekushushwa nekuita zvepabonde, makore, rudzi, rudzi kana chitendero .
Kurudzira a Democratic Charter yeGlobal Citizenship, izvo zvinopedzisa Chiziviso cheHuman Rights (vezvematongerwe enyika, vezvematongerwo enyika uye zvekugara kwevanhu).
Incorporate Pasi Pano kune "International Agenda" yeSADGs, kuti ishande zvakanaka kuburikidza nekushanduka kwemamiriro okunze uye zvimwe zvikamu zvekugara kwezvinhu zvisina kusimba.
Kukurudzira Aiwa Kwete Active Violence kuitira kuti iro rive simba rekushandura rechokwadi renyika, kubva kune tsika yekuisa, kurwisana uye hondo kune tsika dzorugare, nhaurirano uye kubatana munzvimbo imwe neimwe, nyika uye nharaunda mune zvenyika yose inoendeswa kwatiri neizvi Nyika Inofananidzira Rugare uye Kusagadzikana.
Dharirai Manifesto mu PDF
Dhawunirodha Manifesto (French)